Madaxwayne noo magdhow ama noo sarrif Guddomiyaha Golaha dhexe ee kulmiye! |
Madaxwayne noo magdhow ama noo sarrif Guddomiyaha Golaha dhexe ee kulmiye!
Waxa baryahan dhagahayga ku soo dhacaya masuuul masuul kale eed dusha ka huwinaya balse aan cadaymo soo raacinayn, waxaan kaloon arkayaa maskiin cid kale wax ka sheegaya oo inta lala boodo markiiba maxkamada la gaynayo lana leeyahay soo cadee hadal kaad tidhi!! kadibna sidaasi sanaddo ama bilo badan ku xidhnaanayaa, anigoo is waydiinayaa maxaa masuulku markuu masuulka kale eed dusha ka saarayo loo odhan wayay cadynteeda keen?.
Waxaan arkay Dr gaboose oo mawduuc ka hadlay balse ay masuuliyiin kala duwani u jawaabeen ha ugu horeeyo gudomiyaha Golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE Maxamuud Jaamac warfaa (Wadka) isagoo yidhi Dr Gaboose waa shaqsiga ugu badan dadka qaadhanka siiya jabhada caare iyadooynu ogsoonahay in madaxwaynuhu caare iyo jabhadiisaba ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal qaran oo danbi culus ka galay qaranimada Somaliland, cidda gacan siisana tahay cid ku xadgudubtay kuna tageersan fal danbiyeedka uu ku kacay sarkaalku.
Hadaba waxaa is waydiin mudan masuulkan qaranka masuuliyadda wayn ka haya ee ah xildhibaanka ee Xisbi-xaakimkana ka ah masuulka ugu sareeyea gollah dhexe, misena waxaanu cadaymo u hayn sheegaya hadana shaaric ka sheegaya waxa talaabo looga qaadi waayay. maxaa loo waydiin waayey cadaynta uu ku xaqiijinayo in uu Gaboose dhaqaale iyo gacan qabashada siiyo oo uu hubeeyo jabahada danbiilayaasha qaran loo aqoonsaday?
Mise sheekadaa ah ayaa loo cawdaa yaase laga cawdaa? oo masuuliyiinta qaranku way ku wada socdaan arinkan?
Aniga shaqsiyan laba waxbaa iisoo baxay. waa mida koobaadee guddoomiyaha ahna xildhibaanka in loo soo dhiibay kalmada oo la leeyahay u jawaab waxaad doontaana ka sheeg cidi kula hadli maysee.
Waa ta labaade in gudoomiyaha xabbada la isaga dhigayo oo la doonayo in isku dhac ama ficil xumo dhex marto beesha uu ka soo jeedo iyo deegaanka Dr. Gaboose ama in beesha xildhibaanku ka dhashay iyo beesha dhakhtarku kasoo jeedo la iska horkeeno, lana muujiyo in beesha xildhibaanku ku taabacsantahay arintan aflagaadada ah dagaalkeeduna cadyahay.
Tan danbe ayaanay u badantahay fikirkayga iyo aragtidayda kooban.
haddaba anigoo ah beesha uu ka soo jeedo Xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa, waxaan leeyahay madaxwayne inankayagii waad dishay rasaastii kugu socotayna isagaad isaga dhigtaye, annaga noo sarif oo waxaanu ku badalano kagana samirno inankayaga na tus midhaha aanu aragno oo aanu la fikir noqonee isaguna marba ciduu doono hakaa difaaco xabbaduu doonanan ha isku dhigee.
Sidaas darteed waxaan madaxweyne mar kale kugu adkaynaynaa in Beesha uu ka soo jeedo xildhibaanku ee Toljece aad 4 agaasime iyo 1 wasiir buuxa ugu bedesho magdhowgii boqolahaas aad rasaasta isaga dhigtay.
Waxa kale oo aan Gaboose iyo Beeshiisa leeyahay wixii Qadaf iyo qallooc ah ee uu ku kacay guddoomiye Warfaa xaal ka qaata, mana aha arrin beel ahaan iyo qof ahaanba aanu kaga raali nahay, waxaanan si gaar ah uga xunahay in uu guddoomiyuhu wax ka sheegay Shir beelleed oo aragti ahaan aanu kala simanahay Beelaha Somaliland ee kale.
Waxaanan xusuusinayaa Dakhtarka iyo deegaankiisa, in aanu Guddoomiyuhu fiiro iyo fogaan eeg lahayn marka uu hadlayo, horena uu eeddeyn iyo dunuub aanay lahayn dusha uga saaray siyaasiyiin ka soo jeedda Beeshayada, gaar ahaan waxa la ogaa in bishii hore uu shir jaraa’id oo noocan oo kalaa ku sheegay in Siyaasi Yusuf Garas oo ka tirsan Xisbiga Kulmiye uu tegay Jubbaland. Ninka uu sidaa u eeddeeyey waakii ka hadlay Addis Ababa ee cadeeyey in aanu Kismaayo tegin. markaa hubsiimo la’aantiisu ceeb maaha ee waa caadadii inta uu qasriga ka soo xambaarayo farriimaha.